Tsika Mabhuku, Tsika Pepa Bhegi, Tsika Pepa Bhokisi - SmartFortune
Yakasarudzika Pepa Bhegi
Yakasarudzika Pepa Bhokisi
SmartFortune Packaging Co Ltd ndeyeChina yakavakirwa Kudhinda & Kupakata mugadziri uyo anoshanda mukugadzira akasiyana siyana etsika mabhuku kudhinda, akagadziriswa mabhokisi, akagadzirwa mapepa mabhegi nezvimwe zvigadzirwa zvemapepa.
Fekitori yedu iri muDongGuan guta, GuangDong Province, China; Iri pedyo neHongKong, ShenZhen uye GuangZhou, ingangoita 1 awa nemotokari.
Isu tine vangangoita mazana matatu nevashandi vane hunyanzvi, uye tichishandisa mukana wedu ungangoita wemakore makumi maviri nemashanu, isu taigona kupa vatengi mhinduro inodzora pamutengo wekukwikwidza wefekitori uye nekukurumidza kuchengetedzwa kuendesa kumusuwo.
Ndapota taura nesu kuti uwane mari yako, tichakupindura iwe nekukurumidza sezvazvinogona.
Tsika bepa bhokisi
Tsika bepa bhegi
Flap board mabhuku
tsika Inzwi bhuku rekutambisa revana
purinda yekupenda nyaya yebhuku
Kudhinda bhuku rekubika
gadzirisa kupeta makadhibhokisi bhokisi
gadzira Kadhibhodhi bhokisi rine PVC hwindo
Yakapetwa chipo chipo bhokisi
gadzira Chokoreti chipo bhokisi
kraft bepa bhegi Wholesale
gadzira yekutenga bepa bhegi fekitori
Yedu yepakati zvakanakira
Sevha mutengo wako neanopfuura makore makumi maviri neshanu ruzivo mukudhinda nekupakata indasitiri.
Kurumidza kupindura kubvunza kwako -Kana iwe uchida, anogona kunge ari maawa makumi maviri nemaviri pamhepo kwauri.
Ipa rubatsiro kune yako artworks dhizaini yemhando yako mabhuku, mabhokisi akagadzirwa uye mabhegi etsika.
QC yakanyatso kudzora nhanho dzese panguva yekugadzirwa kwemazhinji kwehunhu hwakanaka
Sangana inodikanwa yekukurumidza zuva rekutumira kana vatengi vachida
Kurumidza kupindura kwemashure -sales mibvunzo kana matambudziko kana paine
Pasuru yekudhinda nemhando dzakasiyana dzekutakura
Midziyo kana kurongedza, nekushongedza mashandiro ezvinhu. Kavha ndeye kuenderera kweyekugadzira nzira yezvigadzirwa mukutenderera, uye chiitiko chakakosha kuti zvigadzirwa zvipinde muminda yekutenderera neyekushandisa. Basa rekupakata rine zvinotevera ...
Ndeapi marongedzero eChina ekutsigira kusimudzira kwakasimba kwemaindasitiri ekudhinda nekurongedza?
Ndeapi marongedzero eChina ekutsigira kusimudzira kwakasimba kwemaindasitiri ekudhinda nekurongedza? Sezvo bepa rekudhinda nekurongedza maindasitiri riine simba rakasimba rekutora basa, uye mwero wekusvibisa kwezvakatipoteredza wakadzikira, hurumende dzenyika neyemunharaunda vane st ...
Zvakawanda sei zvaunoziva iwe pamusoro penzvimbo yekudzivirira ezvemamiriro ekudhinda mabhuku evana?
China yevana yekudhinda mabhuku musika iri kuramba ichiwedzera kubudirira sezvo vabereki vachinyanya kutarisisa kuverenga uye vakawanda uye vabereki vachiwedzera kuteerera kuverenga. Pese panosimudzirwa chitoro chepamhepo, data rekutengesa remabhuku evana rinogara richishamisa. Pa ...
Ndeapi mikana yakawanda iyo musika yemabhuku evana ine?
-Kubva kuSmartFortune Sina Dzidzo yakaburitsa iyo "2017 White Pepa paChina Mhuri Dzidzo Yekushandisa" (pano inonzi "White Paper") mazuva mashoma apfuura. Iyo "White Pepa" inoratidza kuti chikamu chedzidzo yekushandisa mudzimba chinoramba chichi ...
© Copyright - 2012-2023: All Rights Reserved.